5 NOOC OO AH DAAWEYNTA DACHA AMA SIDA LOOGA TAGO WALAACA DHAN ALBAABKA? - WARARKA
Dad badan, fasaxa xagaaga waa mid xiiso leh oo faa'iido leh xataa xitaa munaasabadda. Dhamaantiis, meeshiiska waxaa lagaa rabaa inaad ku taal meel bannaan oo dibedda ah, iyo gurigaaga oo aad dareentid raaxo badan.
Waxaa intaa dheer, waxaa jira siyaabo kuu ogolaanaya inaad sameysid (oo aad sameysid) beertaada gaarka ah oo leh jawi hal abuur leh iyo bogsiin. Thanks to this aad runtii ku raaxeysan karto iyo ka bogsan karo, ka takhalusi diiqadda. Hadda waxaan tixgelin doonaa fursadaha qaar ee hawlaha waddanka ee ay ku taliyaan cilmi-nafsiyaadka iyo khabiiro kale.
Wax-soo-saarku wuxuu caawiyaa oo kobciyaa, waxaana jira bannaan weyn oo loogu talagalay hal-abuurnimada ka jirta gurigiisa xagaaga.
Ka dib dhan, ka hor adiga iyo dhirta kala duwan iyo qalabka iyo meelo badan.
Intee in le'eg ayaad dooraneysaa inaad abuurto, laakiin qaababka aad u kala duwan ee aad u xiiso badan tahay.
Qofku wuxuu jecel yahay in uu dhirta ubax abuuro oo uu abuuro walxo kala duwan, kuwa kalena waxay sameeyaan wadooyinka beerta. Isticmaalka runtii aad u weyn Qaado dhaqdhaqaaqyada noocan oo kale ah ee adiga kugu habboon aad ugu faraxsan iyo xiiso leh.
Xasuuso, shey kasta oo la cusbooneysiin karo iyo tusaale ahaan xariirkaagii hore, oo aad dooneysid inaad tuurto, wuxuu noqon karaa mid aad u weyn gurigaaga ama dhulkaaga dalka. Waxa kaliya ee lagama maarmaan ah in lagu dhejiyo fikrad yar iyo midabyo madaxeed. Sidoo kale waxay khuseeyaan waxyaabo kale oo badan.
Halkan waa inaad sii wadaa isbedelka jimicsiga, laakiin u dhaqso si hufan oo maskax leh. Waxaad u baahan tahay inaad fahanto nooca niyadda aad rabto inaad ka hesho beerta, waxa dareemo. Midabada kala duwan ayaa loo adeegsadaa tan.
Ka dib markaad eegto, waxaad u fiirsatay midabada sifooyinka ee silsiladaha cuntada degdega ah - cas, casaan iyo wax la mid ah, waxay ku dhiiri gelinayaan rabitaanka cuntada, dhaqdhaqaaqa. Isbitaalada iyo hay'adaha la midka ah, darbiyadu inta badan waa buluug ama cagaar - midabkani waa cilad.
Sidan oo kale, waxaad abuuri kartaa niyadda kala duwan iyadoo la isticmaalayo midabada. By habka, (hadda waxaa jiri doona dullin funny) midabada midabada iyo wuxuu noqon karaa tan this aalad muhiimka ah. Waa inay si fudud u dhirta dhirta kala duwan ee qaybaha kala duwan ee beerta iyo sariiraha ubax ee midabada kala duwan.
Inkasta oo, dabcan, ha dayacin waxyaalaha dhirta:
qaababka dhismaha yar yar;
midabada qaababka kala duwan;
Qodobbadan waxay sidoo kale awood u yeelan karaan inay abuuraan dareenkooda midab.
Haddii aad leedahay cawska iyo cawska, markaa midabka ugu weyni wuxuu noqon doonaa mid cagaaran, laakiin ha walwalin, midabkani wuxuu u muuqdaa mid dhexdhexaad ah, taas oo ah, dhab ahaantii, wuxuu u dhaqmaa sida kan oo aad abuuri karto.
Tusaale ahaan, haddii aad rabto inaad wax qabato, markaa dhirta noocan oo kale ah: dawanno iyo miro-dhejis, jilcoon, aconites, delphinium ayaa faa'iido leh. Waxay leeyihiin wareegyo buluug ah waxayna abuuraan niyadda isku dhafan oo nabad ah.
Si aad isugu darso waxqabadka, waxaad isticmaashaa dhirta gaduudan: dhoobo guduudan, burgundy phlox iyo dahlia, peonies hooska cherry.
Dabcan, inta badan, ubaxyo badan oo isku dhafan ayaa loo isticmaalaa beerta, laakiin mararka qaarkood waa wax xiiso leh in ay leeyihiin qaybo yar oo beerta ah. Waxaa si gaar ah u xiiso leh in la fiiriyo sida xalka iyo midabka midabku u baddalaan maalin kasta ama cimilada kala duwan.
Sida caadiga ah, dareemadani waa la iska indho-tirayaa, laakiin waxay yihiin kuwo aad u muhiim ah. Gaar ahaan haddii aad rabto inaad nasato oo nasato.
Qaado tusaale fudud. Magaalada aad mar walba ku soco kabo iyo hadiyo goorba dusha dhulka. Inkastoo markii ugu horeysay ee cagta ay aad u faa'iido badan tahay in lagu socdo isdabamarin, unugyada dareemayaasha ee kala duwan ayaa ku lug leh, maskaxda iyo garashada ayaa si fiican u shaqaynaya.
Dhamaanba (qiyaasta taariikheed) dhawaanahan, dadku waxay ku socdeen kaliya meelo aan caadi ahayn waxayna xitaa akhrin karaan cagahooda macluumaad muhiim ah oo ka yimid dhulka. Illaa hadda, dadku waxay leeyihiin saameeyn tan.
Sidaa daraadeed, way fiicantahay inaad ku socoto cagaarsho cawska, sida xooggan oo kale ayaa soo baxaya ka dib markaad socoto. Haddii aad rabto inaad kala soocdo dareemayaasha, samee waddo yar oo dhagaxyo yar ah ama ku dar mari yar oo bac ah. Eeg waxa aad ku raaxaysatid socodka iyo jiifka, waxa la taabto.
Sida waafaqsan, u samee beerta ku salaysan qaybta taabashada. Xitaa alaabta beerta waxay doortaan mabaadiidaas. Kadib, qofku wuu ka roon yahay raaxada roogga, halka kuwa kale ee ugu haboon ay tahay hammock raaxo leh.
Waxaa laga yaabaa inaad adigu naftaada ogtahay sida urta ay u go'aamiso garashada iyo dareenka iyo sida ay kuu caawin karaan inaad ku nasto ama diirada saarto. Tusaale ahaan, aad ayay u wanaagsan tahay in la qubaysto qubeyska oo leh qubeys ah oo ka takhaluso walbahaarka iyo walwalka.
Beertu waxay siisaa fursado badan oo ay ku raaxaystaan ​​nacasyo dabiici ah oo badan. Nasiib wanaag geedka kasta waa mid aad u yar ama yar oo waxtarka leh iyo bogsashada. Haddii aad ogtahay waxa urta isticmaalka, ka dibna beerku wuxuu noqonayaa farmashiyo dhab ah oo cajiib ah.
Tusaale ahaan, waxaa jira dhirro badan oo nadiifiya hawada oo xitaa burburiya bakteeriya. Dhirta Kuwani waxay si fudud u bogsiinayaan.:
xajka iyo xannaannada;
geed husob la yidhaahdo;
qubeyska iyo jecelyihiin;
Mellis iyo naas;
Dhirta noocan oo kale ah iyo geedo yaryar ayaa lagu beeray beerta oo dhan, gaar ahaan, goobaha madadaalada iyo waddooyinka, si ay u badan yihiin ku raaxaystaan ​​kuwan bogsanaya.
Aynu kula talinno dhirro dheeraad ah: digir macaan iyo tubaako, chubushnik, shool, reseda, mattiola. Joogitaanka beerta u dhow dhirta ubaxyada waxay noqon kartaa bedel aad u fiican ee aromatherapy dhabta ah.
Meelaha magaalada ee qashinka nukliyeerka waa dhibaato aad u weyn. Dhawaaqyada ganacsiyada, gawaarida iyo dhawaaqyada la midka ah ayaa ka adkaanaya, iyo dhawaaqyada dabiiciga ah ee dabiiciga ah waa mid aad u yar oo aan ku dhawnayn. Sidaa daraadeed, beerkaygu waa mid aad u caan ah oo leh fursadda dhageysiga codka dabaysha ee laanta, codadka noocyada kala duwan ee shimbiraha, tufaaxa iyo wixii la mid ah.
Si loo yareeyo dhawaaqyada waddada (haddii ay jirto waddo u dhow) isticmaal dabbaalado waaweyn oo ka soo jeeda kala duwan. Waxay si fiican u naaqusaan sanqadhaha iyo, habka, shimbiraha kala duwan inta badan degaan, kuwaas oo awoodi doona inay ku farxaan ay heeso gaar ah. Haddii aad rabto shimbiro dheeraad ah beerta, rakibi quudiya iyo cabitaanka, dhirta dhirta leh berry.
Intaa waxaa dheer, isticmaal noocyo kala duwan oo ah beerta iyo balliyada, kuwaas oo siinaya asal fiican oo wanaagsan. Samee meel bannaan oo banaan beertiisa.